Home Wararka Wasiir Beyle Beentii Shalay 2017 iyo Beenta Maanta 2021. Yaab Aaway Diintii...
Wasiir Beyle Beentii Shalay 2017 iyo Beenta Maanta 2021. Yaab Aaway Diintii iyo Dadnimadii?
Markii talada dalka ay la wareegeen NN 2017, Beyle iyo Kheyre waxay noo sheegeen inay isla markiiba ay bixiyeen mushaarooyinkii la bixin waayey lixdii bilood ee tagtay ee ka soo hartay mushaar bixintii 56 bilood ee dowladdii ka horreysay, laakiin dadka Somaliyeed looma sheegin sababta inay ahayd in hay’adaha caalamiga ah ay jareen kaalmada inta doorashooyinka ay ka dhamaanayaan, waxaa la waday been iyo dacaayad lagu marin habaabinayey Shacbiga oo weli ilaa maanta la wado.
Dowladdii hore wax khibrad ah uma lahayn xaaladda noocan oo kale ah inay dhici karto laakiin NN way u lahayd haddana waxay sheegayaan inay ku dhacday sidaas oo la joojiyey kaalmooyinkii mushaarka lagu bixin jiray lix bilood ka hor doorashada 2021 sidii doorashadii 2016.
Halkaan waxaa ka muuqda laba khalad oo munaafaqnimo ah:
In si joogto loogu edeyn jiray dowladdii hore waxa ay ka mas’uul ahayn oo degdeg uga dul dhacay joojinta kaalmada lix bilood ka hor, mana jirin khibrad ka horreysay oo laga ogaado oo ay dowladdaas dayacday sida Beyle iyo Kheyre u dayaceen xogtaas muhiimka ah oo maanta laga sii tashan karay.
In aan waxba laga baran hannaanka geddisocodka dowladnimo iyo hogaaminteeda oo mar waliba muhiim u ah waddaniyad iyo daacadnimo madaxda wax hogaamineysa xelligaas inay shacbiga runta la wadaagaan xataa haddii ay amaan u tahay madaxdii hore sida arrinka badda oo ay shacbga ku diirsadaan aadna ugu amaanaan MW hore Xasan Sheekh.
Maanta Beyle Beenaale ayaa hadda waxaa uu noo sheegayaa sheeko uu rabo inay caqliga Somalida kula ciyaaraan NN, tan oo la hubo in shacbiga ay hadda ka koreen beenta Beyle uu gudaha NN ka sheegayo iyo tan Kheyre oo uu bannaanka NN ka sheegayo maadaama ay rabaan inay wada sheegtaan haddiiba ay guul ay jirto 2017-2021. Sababtoo ah isku dan ayey weli yihiin laba koox (kooxda NN iyo Kooxda Mucaaridka ) ha kula jiraane. NN waa fashishay waxay la maid tahay Kheyre waa Fashilay waayo isagaa hogaanimayey NN muddo seddex sano iyo Bar oo lahaa “ Aniga iyo Farmajo intaan joogno nalakama weecin karo waddada Saxda ah” Tolow ma fashilkan ayaa wadada saxda ah ahaaa? Kheyrow ka jawaab.
Beyle waxaa uu maalin dhoweyd yiri isago uu qiildayay hantida la dhacay ee ah mushaarooyinkii shaqaalaha iyo Ciidamada oo la rabo in doorashada lagu galo hadalkan: “Lix bil kahor doorashooyinka ayey jaraan kaalmada, waxaa lasoo celiyaa marka la doorto madaxweynaha waxa ay ku qiimeeyaan isbadalkiisa iyo sida uu howsha u wado marka ay taa ka qancaan ayey dib usoo celinayaan,” ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
Yaab muxuu beenta uu u sheegayey markii uu yimid 2017 oo ay diwladdii hore ugu eedeynayeen in aysan mushaarooyinka bixin, shacbigasa maxaa loo marin habaabiyey?
Khaladka dhacaa ee aad ogaatid waxbaa laga bartaa maadaama dowladdii Hore laga jaray kaalmada toddoba bilood ka hor maxaa:
1- Maxaa Wax looga baran waayey oo Beyle iyo NN ugu talogali waayeen in xaalku sidaan noqon karo.
2- Maxaa Markii la ogaaday arrinkan runimadiisa shacbiga loola wadaagi waayey oo ilaa maanta Beyle, NN iyo kheyre ugu faanaan inay bixiyeen mushaarooyin ay dowladdi hore bixin weyday?
Dal been laguma hogaamin karo waana soo baxeysaa mar waliba sida ay hadda tuke cambaar leh uga dhigtay Beyle, Kheyre iyo Farmajo, waxaana madaxda soo socota laga rabaa inay shacbiga runta u sheegaan mar walba.
Waxaa soo baxday in Bangiga Adduuka uu joojiyey kabkii Miisaaniyadda ilaa doorshada maadaama aysan lacagtaas aadeyn shacbiga Somaliyeed ee rabaan NN inay doorashada codadkeeda ku iibsadaan.
Waxaasa soo baxeysa in dowladda NN markii ugu horreysay ay Bangiga dhexe ka deynsatay 22 Miliyan oo dollar si ay ugu bixiso mushaarooyin bilaha Juun $7 M, Juulay $7 M iyo August $8 M, waana markii ugu horreysay oo ay dowladdu bangiga dhexe ka deysato lacag. Hasa yeeshee dadka ka shaqeeya Bangiga dhexe oo ay MOL xiriir la sameysay waxay sheegeen inaysan ka warqabin wax lacag ah oo bangiga dhexe u yaallay. Waxaa la isla dhexmarayaa inuu bangiga dowladda NN u qaaday deyn dulsaar badan leh oo uu qarinayo ama inuu xaraashay hanti badan oo ma guurto ah oo uu bangiga leeyahay kuwaas oo Xamar ku yaalla badankood.
MOL ayaa hadda baaris ku wadda waxa la is dabamariyey iyo sida ay wax u dhaceen waxaana rajeyneynaa inaan idiin soo bandhigno doorashada Ka hor haddii rabbo Idimo.
Previous articleMW Hore ee Koofur Africa Jacob Zuma oo lagu xukumay 15 bilood xabsi ah
Next articleDAAWO: Kheeyre & Farmaajo oo Dhalinyaradii ay u direen Eretria oo qeeyb ka ah Dagaalka ka Socda Gobolka Tigrey-ga
Hay’adda Amnesty International oo Mareykanka ka dalbatay inuu bixiyo Magdhowga dadkii...